လိင်အတွေ့အကြုံရှိသောအလယ်အလတ်မှနှောင်းပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှု၏ပျံ့နှံ့မှုနှင့်လက္ခဏာများ။ (၂၀၁၄) - ခင်ဗျားရဲ့ ဦး နှောက်
comments: ဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးအတွက်လားနှင့်အနိမ့်အလိုဆန္ဒအားလျော့လူတိုင်းအတွက်အလွန်အံ့သြစရာအဖြစ်အသိပေးစာယူစေသင့်ကြောင်းအရာဖြစ်ကြ၏။ ဒီလေ့လာမှုကအရွယ်ရောက်ပြီးသူများတွင်တွေ့ရသောနှုန်းထားများလွန်ကဲ 16-21 တစ်နှစ်ကြားရှိအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု၏နှုန်းထားများတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယောက်ျားများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (54%) ၏မြင့်နှုန်းထားများအထူးသဖြင့်အံ့သြစရာခဲ့ကြသည်:
မှတ်ချက်: အထက်ပါရာခိုင်နှုန်းတှငျတှေ့အကြောင်းကိုနှစ်ကြိမ်ရှိသူများဖြစ်ကြသည် ယောက်ျားအသက်အရွယ် 40-80 ၏ဤလေ့လာမှုတွင်။ အဆိုပါ 1940s Kinsey အတွက်ခွန်အားမရှိခြင်း၏ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ကိုသတိပြုပါ 1 နှစ်ပေါင်းများ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့် 19 နှစ်အောက်အသက်အရွယ်များ3နှစ်အောက်အမျိုးသားများတွင် 45%, ယောက်ျား၏ 7% ထက်လျော့နည်း, 55% 25 နှစ်ပေါင်းထက်လျော့နည်းခြင်းနှင့် 75%.
ဤရွေ့ကားဒေတာ (အသီးသီး 54% နှင့် 51%) အလားတူယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုမြီးကောင်ပေါက်များ၏အချိုးအစားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာအတွက်ပြဿနာတစ်ခုရှိခြင်းအဖွစျဖျောပွနိုငျကွောငျးကိုညွှန်ပြခြင်း, အရှင်, နှုန်းထားများဒါတသမတ်တည်းလူကြီးများ၏လေ့လာမှုများရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့သောလိင်ကွာဟမှုထုတ်ဖေါ်ကြပါဘူး။ အဲဒီလိုမြင့်မားတဲ့နှုန်းကိုတွေ့အဘယ်ကြောင့်မရှင်းလင်းဖြစ်ပါသည် ခြုံငုံ, ဒါပေမယ့်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုသင်တန်းသားများကိုထက်တစ်ဦးတည်းအမျိုးသမီးပါဝင်သူနှစ်ဦးစလုံးအကြားအထူးသဖြင့်မြင့်မားသောနှုန်းထားသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူစာပေအတွက်ဘုံဖြစ်သကဲ့သို့။
ယေဘုယျအား, ထို 61 အထီးမြီးကောင်ပေါက် (114%) ၏ 53.5 တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာပြလက္ခဏာတွေအစီရင်ခံအဖြစ်ခွဲခြားခဲ့ကြသည်။ Erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့်အနိမ့်အလိုဆန္ဒအထီးသင်တန်းသားများကိုများအတွက်အသုံးအများဆုံးပြဿနာများဖြစ်ကြသည်။ (အလေးပေးသောထည့်ပြီး)
ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး၊ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေတုန်းကအသုံးများလာတဲ့ပြောင်းလဲမှုနှစ်ခုကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်းနဲ့လိင်ကစားစရာအသုံးပြုခြင်းကိုသုတေသီများမလေ့လာခဲ့ပါဘူး။ စိတ်ရှုပ်စရာကောင်းပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုကင်းမဲ့သောလိင်ဆက်ဆံမှုသည်အစဉ်အလာအားဖြင့်ကောင်းမွန်သောအရာများကိုလေ့လာနေဆဲဆယ်ကျော်သက်များကြားတွင်ရှားပါးသည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်၊ နုပျိုသောအလှူရှင်များနှင့်အလိုဆန္ဒနိမ့်ယောက်ျားများသည်တစ်ချိန်ကလူ့ဆယ်ကျော်သက်များတွင်နွားငယ်များ၊ တစ်ခုခုပြောင်းလဲသွားပြီးဒီလိင်စိတ်ပညာရှင်တွေဟာအထင်ရှားဆုံးဖြစ်နိုင်ချေများကိုတောင်မစဉ်းစားကြပါ။
J ကိုလိင် Med ။ 2014 Mar;11(3):630-41. doi: 10.1111/jsm.12419.
O'Sullivan LF1, Brotto LA က, Byers ES, Majerovich ဂျေအေ, Wuest ဂျေအေ.
Little ကအရွယ်ရောက်ပြီးသူနမူနာတှငျတှေ့မြင့်နှုန်းထားများရှိနေသော်လည်းလူငယ်များအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ပြဿနာများနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ဒါဟာအများဆုံးပျံ့နှံ့သို့မဟုတ်ဘယ်လိုဘုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲပြဿနာများကြုံနေရလူငယ်များအဘို့ဖြစ်၏နေသောပြဿနာများကိုရှင်းလင်းသည်။
ဒီလေ့လာမှုကမြီးကောင်ပေါက်များ၏နမူနာအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲများပျံ့နှံ့, အကွာအဝေးနှင့်ဆက်စပ်မှုအကဲဖြတ်ရန်ရည်ရွယ် (16-21 နှစ်).
သင်တန်းသားများကို (အသက် 19.2 ဆိုလို) အသိုင်းအဝိုင်းများနှင့်ဧရိယာကိုအထက်တန်းကျောင်းကနေစုဆောင်းခဲ့ကြ။ အထီးမြီးကောင်ပေါက် (ဎ = 114) အွန်လိုင်း Erectile ရာထူးအမည်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာညွှန်းကိန်း (IIEF) နှင့်အချိန်မတန်မီသုက် Diagnostic Tool ကို (PEDT) ပြီးစီးခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးမြီးကောင်ပေါက် (ဎ = 144) သည်အမျိုးသမီးလိင်ရာထူးအမည်ညွှန်းကိန်း (FSFI) ပြီးစီးခဲ့သည်။ နှစ်ဦးစလုံးဟာအမျိုးသမီးလိင်ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခစကေး (FSDS) နှင့်နောက်ခံ, ဆက်ဆံရေးဟာဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရာဇများ၏အစီအမံပြီးစီးခဲ့သည်။
အဆိုပါ IIEF, PEDT, FSFI နှင့် FSDS သိသိသာသာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာရှိခဲ့သည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်အပေါ်လက်တွေ့ cutoff ရမှတ်များ။
မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်များသည်လိင်ဆက်ဆံခြင်းအခြေအနေအများစုတွင်ကျယ်ပြန့်သောလိင်ဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံကိုတင်ပြခဲ့သည်။ နမူနာ၏ထက်ဝက် (၅၁.၁%) ကလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemနာကိုအစီရင်ခံသည်။ ၅၀.၀% သည်ဆေးကုသမှုခံယူမှုနှင့်သက်ဆိုင်သောသိသိသာသာစိတ်ဆင်းရဲမှုအဆင့်များကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ အလားတူပြproblemsနာများနှင့်စိတ်ဆင်းရဲမှုနှုန်းကိုယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းမှဆယ်ကျော်သက်များတွင်တွေ့ရှိခဲ့သည် အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်, မြီးကောင်ပေါက်၏ဝိသေသလက္ခဏာများ, နောက်ခံနှင့်အတွေ့အကြုံဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြproblemsနာများနှင့်ဆက်စပ်မခံခဲ့ရပါ။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများရှင်းလင်းစွာမြီးကောင်ပေါက်အကြားပျံ့နှံ့နေတဲ့, ဤကိစ္စကိုကိုင်တွယ်ရန်အစီအစဉ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အားကြီးသောလိုအပ်ကြောင်းကိုအလေးပေးသော, သူတို့ကိုတွေ့ကြုံခံစားသူအများအပြားမှစိတ်ပျက်စရာဖြစ်ကြသည်။
မြီးကောင်ပေါက်; အမျိုးသမီးလိင်အလုပ်မဖြစ်; အထီးလိင်အလုပ်မဖြစ်; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ, လူငယ်အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများတွင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး